सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको यो फोटोको यस्तो छ असली कथा ! – Nirantarkhabar
सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको यो फोटोको यस्तो छ असली कथा !
केहीदिन अघिदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा चर्चामा रहेको पुलसम्बन्धी फोटोले बजार पिट्यो ।
यसलाई लिएर सामान्य प्रयोगकर्तादेखि लिएर समाजमा वा सामाजिक सञ्जालमा छुट्टै छाप छोडेका व्यक्तिलेसमेत यस फोटो शेयर गर्दै आ–आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न भ्याए । तर, यस फोटोको बाँकी भाग नभएर सबैलाई छक्क पार्यो ।
पुल नदेखिएको स्थानमा २०.८० मिटर लम्बाई रहेको भनेपछि छक्क नपर्ने कोही भएनन् । तर, वास्तवमा यो फोटो अपूरो थियो । यसको पूर्ण फोटो हेरेपछि यो पुष्टि हुन्छ कि हामी सामाजिक सञ्जालमा वास्तविकता नबुझि लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्छौं ।
वास्तबमा यो सन्देशमुलक समाचार हो । यसले सन्देश दिन खोजेको छ कि हामीले केही कुराको वास्तविक अर्थ नुबझि त्यसलाई शेयर गर्ने र आफ्नो अभिव्यक्तिहरु राखेर सरकारलाई वा सम्बन्धित निकायलाई गाली गलौच गरिनु राम्रो होइन् ।
यस्तो छ यसको पूर्ण भागः
यस समाचारसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा अाएका ट्वीट
अन्ततः सौर्य एयर ६७ करोडमा बिक्री, श्याम अधिकारी समूहले किन्यो, सोमबारदेखि नियमित उडान
अशोकको ‘मन बिनाको धन ठुलो कि’ धन बिनाको मनले पायो फिल्ममा पनि स्थान
तलब भत्ता बृद्धि गरीदिन स्थानिय सरकार सँग माग